Weriye (Yacquub Maxamed Cabdule) Oo Maalintii Sedexaad Ay Beesha Habar-majeerteen Afduub U Haysato – Codka Qaranka Tanadland
Weriye (Yacquub Maxamed Cabdule) Oo Maalintii Sedexaad Ay Beesha Habar-majeerteen Afduub U Haysato
Sawirka weriye (Yacquub Maxamed Cabdulle)
Waxa beesha habar-majeerteen mudo sadex maalmood ah afduub ay magaalada garoowe ugu haysataa weriye (Yacquub Maxamed Cabdulle). Weriye (Yacquub Maxamed Cabdulle) waa wiil dhalinyaraa oo aqoonyahan ah. Weriye (Yacquub) wuxuu beel ahaan ka soo jeedaa beelweynta reer (Xaji Cali Muumin). Wuxuuna ka sii yahay lafta reer (Muumin Xaaji). Weriye (Yacquub) intii la afduubay waxaan la hadlay dad badan oo beesha (Muumin Aadan) ah waxayna ii sheegeen kuligood in beesha habar-majeerteen ay ka shalaayidoonto falkaan waxashnimada ah. Si gaar ahna waxaan ula hadlay rag ka mid ah beesha reer (Xaaji Xuseen) oo ka mid ah beelaha reer (Xaaji Cali Muumin). Ragaasina waxay ii sheegeen inaysan iyagu wax afduubayn balse ay rag badan ka laynayaan beesha habar-majeerteen.
Marka aan nimankaas la hadlay waxay ahayd maalinkii doraad ahaa, maanta ayaan nimankii mar kale la hadlay oo waxaan weydiiyey sababta ay ku dhacaday iyadoo wiilkii reer (Maxamed Muumin) afduub loo haysto, in beeshiisu aysan u aarin oo aysan weli wax gebagebayn. Balse waxaa laygu qanciyey in uu qorshe jiro oo ay mar aan fogeyn ay beeshu talaabo deg-deg ah qaadi doonto.
Dagaalkii labada maalmood ee beesha Habar-majeerteen lagu jebiyey waxaa beelaha reer (Ugaas cismaan) ka koonfureed dagaalka u horseeday, beel ka mid ah 12 -ka lafood ee beesha reer (Maxamed Muumin). Beeshaas oo ah beesha reer (Xassan Xuseen”Baarleexyo”).
Marka hada ahna beelaha reer (Yuusuf Cismaan), (Idiris Cismaan) iyo (Maalismoge) waxay dhawrayaan inay talaabo qaado beesha reer (Xaji Cali Muumin) ee wiilkeeda la afduubay.
Hada ka hor waxaa jirtey in wiil weriye ah oo ka soo jeeda beesha reer (Maxamed Muumin) sidaan oo kale loo afduubay, markaas ayaa waxaa dhacday in beesha reer (Maxamed Muumin) ay ninkaas afduubkii la afduubay ay u dishey 17 nin oo afar ka mid ahi ay weriyeyaal yihiin. Nimankaas oo laga diley beesha Habar-majeereen. Qasiyadaan cusubna waxaa hubaal ah inay rag badani u dhimanayaan. Habar-majeerteen waanu naqaanaa oo waa gun daan-daansi badan, dagaalka iyo xabadana wax ka neceb oo xabadda dhawaaqeeda markay maqlaan bay kala firxadaan, oo ay dhabarka jeediyaan
Waxaa kaloo xusid mudan in dagaalkii 1954 -kii ee dhexmaray beesha (Muumin Aadan) iyo Habar-majeerteen uu ka dhashay, nin beesha (Muumin Aadan) ah oo nin dhulbahante ah oo xidid laha mahbarka ay is afdhaafeen, dabadeedna ninkii (Muumin Aadan) uu ninkii hartiga ahaa dhamas kala daaley. Dabadeedna ninkii hartiga ahaa markuu biskoodey inta qori loo soo dhiibey lagu yiri war ninkii ku uleeyey orod oo soo dil. Saas darteedna ninkii hartiga ahaa uu diley ninkii beesha (Muumin Aadan).
Marka markii beesha (Muumin Aadan) ay ku tiri beesha habar-majeereen inata ay goori-goortahay ninkii ninka naga diley noo soo gacangeliya, waxay ku andacoodeen ninka dhulbahante ayaa idinka diley waana u baxsaday ee beeshiisa kala xaala. Markaas ayaa inta lagu duuley rag badan laga soo laayey. Dagaalkii “Car-istaag” bayna ku quusteen oo sidii maalintaas loo quusiyey oo ay gacmaha kor ugu taageen, markii saldhigoodii inta la weeraray laga qabsaday si xunna loo jebiyey. Dagaalkii hartiga kale ay soo wateen ee labada maalmood lagu halaagey baa u xigey.
Arintaan daan-daansiga ah oo naagihii Habar-majeerteen ee xasuuqa joogtada ahi uu mudada dheer ku socdey ay ku kaceena bal aynu dhawro waxa ay ka macaashaan. Beelweynta reer (Xaaji Cali Muumin) oo run ahaantii ay fadeexad tahay waxa ay ilaa iyo hada wax talaabo ah la qaadi la’yihiina bal aynu dhawro waxa ay falaan.
Waxaa hubaal ah in beesha (Muumin Aadan) ay qaadidoonto talaabo culus oo deg-deg ah beesha habar-majeerteen na ay wax badan ka qoomamayn doonaan.